Oge Ordovician: njirimara, geology, ihu igwe, flora na fauna | Network Meteorology
Otu n'ime oge nke Paleozoic nke e ji mara oke mmiri na ịrị elu nke ndụ na usoro okike mmiri bụ Oge Ordovician. Ọ bụ oge a na emi odude ozugbo mgbe Oge Cambrian na tupu nke ahụ Silurian. N'oge a oke mbelata nke ụdị dị iche iche dị na ngwụcha nke mepụtara ihe omume ikpochapu igwe mmadụ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, geology, ihu igwe, ahịhịa na ahịhịa nke oge Ordovician.
3 Ihu igwe nke oge Ordovician
5 Mbibi Ordovician
Oge a dị ihe dị ka nde afọ iri abụọ na otu. Ọ malitere ihe dịka 485 nde afọ gara aga wee dịgide ruo ihe dịka 433 nde afọ gara aga. Ọ nwere nnukwu ọdịiche ihu igwe ebe ọ bụ na ọdịiche dị ukwuu dị n'etiti mmalite na ngwụcha. Na mbido oge ahụ, ọnọdụ okpomọkụ dị elu, mana ọtụtụ mgbanwe gburugburu ebe obibi na-ewere ọnọdụ nke dugara n'oge ice.
Dị ka anyị kwuru na mmalite nke isiokwu ahụ, e nwere oke mbibi na njedebe nke oge ahụ jedebere ihe dịka 85% n'ụdị nile dị ndụ dịrị n'oge ahụ, ọkachasị usoro okike mmiri.
E kewara oge a n'ime oge atọ: Lower, Middle and Upper Ordovician.
Otu ihe njiri mara banyere jioloji nke oge a bụ na oke osimiri kachasị elu. N'ime oge a niile, enwere ndị isi anọ: Gondwana, Siberia, Laurentia na Baltica. Dị ka ọ dị n’oge gara aga, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Osimiri Panthalassa ka dị n’ebe ugwu nke ụwa. Naanị nnukwu mba Siberia na obere akụkụ Laurentia ka achọtara na mpaghara a.
Ebe ndịda, anyị nwere kọntinent nke Gondwana nke wepụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oghere niile. Enwekwara akụkụ nke Baltica na Laurentia. Oké osimiri ndị dị n'oge a bụ: Paleo Tetis, Panthalasa, Lapetus na Rheico. Otutu mara banyere geology nke Ordovician site na nkume okwute nke enwetaghachiri. A na-ahụkarị imirikiti ihe ndị a na nkume.
Otu n'ime ihe ndị kachasị amara na oge a bụ Taconic orogeny.. Okwu a mepụtara site na nkwekọrịta nke nnukwu ala abụọ. Njikọ a dịgidere ruo afọ 10. N'ihi usoro usoro ihe banyere ala a, ndị Ugwu Appalachian.
Ihu igwe nke oge Ordovician
Dịka anyị kwurula na mbụ, ihu igwe nke oge Ordovician dị ọkụ ma na-ekpo ọkụ. Karịsịa na mmalite nke oge ahụ enwere okpomọkụ dị elu, ọbụnadị na-egosi na enwere ebe nwere ndekọ nke okpomọkụ nke ogo 60. Otú ọ dị, na njedebe nke oge ahụ, okpomọkụ malitere ịda ada n'ụzọ nke mere ka ọ bụrụ glaciation dị mkpa. Igwe glasia a wakpoo oke ala Guinea. N'oge a nnukwu kọntinent bụ mpaghara ndịda ụwa. Igwe glashiation ahụ were ihe dịka afọ 1.5. N'ihi usoro a nke na-ebelata okpomọkụ, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị anụmanụ ndị na-enweghị ike imeghari na ọnọdụ gburugburu ebe obibi ọhụrụ nwụrụ.
E nwere ụfọdụ ọmụmụ na-akwado na glaciation ahụ ruru ọbụna na Iberian Peninsula. Nke a pụtara na a ga-ekwenye na nkwere na ice naanị gbasaa na mpaghara ndịda ndịda. Ihe kpatara glaciation a amabeghị. Enwere okwu banyere mbelata nke ikuku carbon dioxide dị ka ihe nwere ike ime.
N'oge ndị Ordovician, ọtụtụ mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ pụtara na-eweta ụdị ọhụrụ. Karịsịa ndụ mepụtara n'oké osimiri. Anyị ga-enyocha ahịhịa na ahịhịa iche.
N’iburu n’uche na ọtụtụ ndụ malitere gburugburu mmiri, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na osisi nwere mmepe ka mma. Okpuru algae juru n’osimiri. Speciesfọdụ ụdị ero dị iche iche nọkwa nke mejupụtara ọrụ nke ire ere na iretọ ihe ndị nwụrụ anwụ. Nke a bụ otú oké osimiri si achịkwa onwe ya.
Akụkọ banyere inweta sistemu nke ala dị iche na nke mpaghara mmiri. Na flora fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị. Ọ bụ naanị obere osisi ole na ole malitere ịchị mba ala. Osisi ndị a bụ nke mgbe ochie na nke nkiti. Dị ka atụ anya, ha abughi osisi akwara, ya bu na ha enweghi xylem ma obu phloem. Ebe ọ bụ na ha abụghị osisi akwara, ọ dị mkpa ịnọ nso n'akụkụ ọmụmụ mmiri iji nwee ike ịchọta ezigbo nnweta ya. Typesdị osisi ndị a yiri imeju anyị maara taa.
N’oge Ordovicia, umu anumanu juputara na oke osimiri. Enwere otutu ndu di iche-iche site na pere mpe na nke ochie nye umu anu ndi ozo kariri ma nwekwaa mgbagwoju anya.
Anyị malitere ịme arthropods. Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ phyla n'oge a. N'ime arthropods anyị hụrụ trilobites, mmiri scorp na osimiri brachiopods, n'etiti ndị ọzọ. Mollusks nwekwara nnukwu mbido mbido. Cephalopods, bivalves na gastropods dịkarịsịrị n'oké osimiri. Ndị nke abụọ a chọrọ ịkwaga n'ụsọ oké osimiri, ma ebe ọ bụ na ha enweghị iku ume ume, ha enweghị ike ịnọ na ebe obibi nke ụwa.
Banyere coral ndị ahụ, ha malitere ịkọkọta ọnụ iji mepụta akpa coral mara mma ma nwee ụdị ihe atụ dị iche iche. Ha nwekwara ọtụtụ spong nke na-agbasa ugbu a n'oge Cambrian.
Mkpochapu mmadu a mere ihe dika 444 nde afo gara aga wee banye na njedebe nke oge Ordovician na mmalite nke oge Silurian. Ihe ndị ọkachamara Sayensị na-akụ nzọ bụ ihe ndị na-esonụ:
Mbelata nke ikuku carbon dioxide. Nke a butere glaciation zuru ụwa ọnụ nke belatara ọnụ ọgụgụ ụmụ anụmanụ na osisi.
Mbelata nke oke osimiri.
Na glaciation onwe ya.
Mgbawa nke nnukwu ugwu. E mepụtara tiori a n’ime afọ iri mbụ nke narị afọ XNUMXst. Ọ na-ekwu na enwere ihe gbawara na mbara igwe site na nnukwu ikuku nke mere ka gamma ụzarị kpuchie ụwa. Egwuregwu gamma ndị a mere ka ike gwụ ozone oyi na ọnwụ n'ụdị ndụ ndị dị n'ụsọ osimiri ebe enwere obere omimi.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oge Ordovician.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oge Ordovician
Echere m na n'ụzọ dị iche, nnukwu ọnụọgụ nke CO2 na mbara igwe na-akpata mmetụta griin haus, na-ahụ maka mgbanwe ihu igwe nke nwere ike ịkwụsị na Ordovician Period. N'ime ọmụmụ ihe a, ha na-ekwu ihe megidere nke a, na ọ bụ obere CO2 kpatara oge a. Ọ bụ ezie na a na-eji CO2 eme ihe na griin haus iji meziwanye ihe ọkụkụ, enwere m obi abụọ na ibelata nke a ga-eme ka afọ kpụrụ. Kedu ihe ị chere?
Zaghachi Javier Manrique